‘मोहनी लगाउन’ आतुर घोडेपानी | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home आर्थिक ‘मोहनी लगाउन’ आतुर घोडेपानी
‘मोहनी लगाउन’ आतुर घोडेपानी
२०७६, २८ भाद्र शनिबार २१:२६
A view of Dhaulagiri mountain is seen in the background of Ghorepani village,atourist destination in Annapurna Rural Municipality-6 of Myagdi district, on Friday, October 27, 2017. Photo: RSS
बर्खा सकिएको छ। मौसम भ्रमणका लागि अनुकूल बन्दै छ। दशैं तिहार र छठ पर्वको लामो बिदा पनि नजिकिँदै छ। बिदाको सदुपयोग गर्न कतै भ्रमण गर्ने विचार गर्नुभएको छ भने तपाईंलाई स्वागत गर्न आतुर छ राउण्ड अन्नपूर्णको प्रमुख पर्यटकीयस्थल रोमान्टिक पुनहिल र भर्जिन घोडेपानी।
आउनुहोस् स्वागतका लागि तम्तयार छन्। शारदीय शोभासहितका घोडेपानी पुनहिल र उत्तरतर्फका सेताम्ये हिमालय पर्वतहरु। चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्ने घोडेपानी र पुनहिलबाट आँखै अगाडी हिमशृंखला र सूर्योदयको मनोरम दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। स्थानीयले घोडेपानी हुँदै पुनहिल पुग्न पदमार्ग निर्माण गरेका छन्। पुनहिलका संस्थापक स्वर्गीय टेकबहादुर पुनको स्मृतिमा भ्युटावर निर्माण भएको छ। गाउँका विभिन्न नाकामा प्रवेशद्वार बनाइएका छन्।
पर्यटकलाई आकर्षित गर्न पुन मगरहरूको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पहिचान झल्काउने मगर संग्रहालय पनि सञ्चालनमा ल्याएका छन्। साच्चिकै मनमोहक छ पुनहिल र मोहनी लगाउन आतुर छ घोडेपानी। समुन्द्री सतहबाट ३ हजार २१० मिटर उचाइमा रहेको पुनहिलमा शरद ऋतुको सुरुवातसँगै पर्यटकको भीड लाग्ने गर्छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको गुराँसे जंगलमा १९ प्रजातिका गुराँस पाइन्छ। घोरेपानीदेखि १ घन्टाको पैदल दूरीमा उकालो हिँडे पनि पुगिने पुनहिल पहिले सामान्य पहाडी टाकुरा थियो। पर्यटक आउने क्रम बढ्न थालेपछि खिवाङका मेजर टेकबहादुर पुनले २०२१ सालमा डाँडालाई पुनहिल नामकरण गरेका हुन्।
भर्जिन हिमालको दृश्‍य
पुनहिलमा उभिँदा हात अघि बढाए छोइएलाझैं लाग्ने धौलागिरि, नीलगिरि, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे हिमालको सौन्दर्य तिनै भर्जिन हिमाल हेर्न संसारका लाखौं पर्यटक घोडेपानी अर्थात् पुनहिल पुग्ने गर्छन्। तिनै पर्यटकलाई सेवा र सहयोग गर्न आवश्यक सुविधा चाँजोपाँजो मिलाउन घोडेपानीका होटल व्यावसायी लागि परिरहन्छन्। घोडेपानीका होटल व्यवसायी मगर जातिका छन्। उनीहरू सधैं पर्यटकको खानपान, खाजानास्ता र बासका लागि व्यस्त हुन्छन्। उनीहरूको दैनिक कार्य नै पर्यटक सेवामा लाग्नु हो। हिमाल र गुराँसकै कारण घोडेपानी अर्थात् पुनहिल संसारभरि चिनिएको छ। हिमाल घोडेपानी र पुनहिलको समृद्धि र विकासको लागि पर्यटन व्यवसाय जोडिएको छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको घोडेपानी अर्थात् विश्वचर्चित अन्नपूर्ण र पुनहिल।
पर्यटकलाई प्यारो ठाउँ
घोडेपानी हिमाल, गुराँस र प्राकृतिक सौन्दर्यका कारणले पर्यटकलाई प्यारो र आफ्नै जस्तो लाग्ने गरेको छ। घोडेपानीका पर्यटन व्यावसायी केबल पैसा कमाउन र पर्यटनलाई व्यावसायसँग जोड्न मात्र होइन पर्यटकको सेवा र सहयोग गर्न पनि गर्छन्। घोडेपानीबाट पुनहिल जानका लागि उकालो चढ्ने क्रममा कोही बिरामी अशक्त वा घाइते भयो भने आफैंले बोकी पुनहिलसम्म पुर्‍याउँछन्। बिरामीलाई अस्पतालसम्म लैजानु र सारो गाह्रो परेका पर्यटकलाई सहयोग पनि गर्छन्। प्रकृतिको सदाबहार सौन्दर्य, हिमशृंखलाको चुम्बकीय आकर्षण र स्थानीय सहयोगी र सेवा प्रधान भावनाले घोडेपानी र पुनहिलको समृद्धि चुलिँदै गएको छ।
पर्यटकका लागि मगर, गुरुङ बस्ती, कला, संस्कृति जीवनशैली, हिमशृंखला, सूर्योदय, लालीगुराँस जंगल पदमार्गको मुख्य विशेषता हो। घान्द्रुक घोडेपानी क्षेत्रमा चिनियाँ, फ्रेन्च, कोरियन र मलेसियन पर्यटक बढी मात्रामा पुग्ने गरेका छन्। म्याग्दी, मुस्ताङ, कास्की, लमजुङ र मनाङ जिल्लालाई समेटिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र भ्रमण गर्न पछिल्लो समय सार्क राष्ट्रका पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति १ हजार र तेस्रो मुलुकका पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति ३ हजार शुल्क लिने गरिएको छ। घोडेपानीमा जति पनि पूर्वाधारहरू निर्माण भएका छन्। त्यसमा सरकारको लगानी थोरै र स्थानीयको श्रम बढी छ।
कसरी पुग्‍ने घोडेपानी?
कास्कीको पोखरा–नयाँपुल, घान्दु्रक हुँदै घोरेपानी तथा म्याग्दी सदरमुकाम वेनी–तातोपानी, घारा, शिख हुँदै घोरेपानी र नागी–महरेडाँडा हुँदै पुनहिल जान सकिन्छ। अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्ग सुरु भएपछि बाटो हिँड्ने पर्यटकका लागि चिया, नास्ता खुवाउन खुलेका साना होटलले पर्यटकको बाक्लो आगमन बढ्दै गएपछि आजभोलि सुविधासम्पन्न होटल बनेका छन्। पर्यटक आगमन बढ्न थालेपछि प्रहरीले सुरक्षाका लागि गस्ती गर्न थालेको छ। अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्ग विश्वका उत्कृष्ट १० गन्तव्यभित्र पर्छ।
म्याग्दीको घोडेपानी, पुनहिल, कास्कीको घान्द्रुक, लान्द्रुक, एबीसी क्याम्प, घम्पुसलगायत पर्यटकीयस्थल पदयात्राको आकर्षण बनेको छ। वीरेठाँटीबाट भित्रिएका आधाजसो पर्यटक छोमरोङ हुँदै अन्नपूर्ण आधारशिविर अर्थात् एबीसी पुग्ने गर्छन्। पदयात्रामा जाने पर्यटकको आवास र खानाका लागि घोडेपानीमा सुविधासम्पन्न होटल सञ्चालनमा छन्। पर्यटक आगमन बढ्दै गएपछि होटल व्यवसायीले समेत सेवा सुविधालाई गुणस्तरीय बनाउँदै लगेका छन्। घोडेपानीका होटल व्यवसायीले होटलको क्षमता विस्तार गर्दै लगेका छन्। पर्यटकलाई खान र बस्नको कुनै समस्या छैन। पर्यटकलाई आरामदायी बसाईलाई ध्यानमा राखेर होटल व्यवसायीले सेवा दिँदै आएका छन्।
Previous articleदोसल्ले: ५१ लाख लागतमा झोलुङ्गे पुल निर्माण, डेढ घण्टाको बाटो अब २० मिनेटमै
Next articleमृगौलापीडितलाई मोना बहराईनको सहयोग